Nke ahụ na-eweta PlexEarth 2.0
Na Nọvemba nke afọ gara aga emere m nyocha nke mbipute 1 nke PlexEarth Ngwaọrụ maka AutoCAD, nke n'etiti ihe ọhụụ ya gụnyere mmekọrịta nke AutoCAD na Google Earth. N'isiokwu a enwere mmepe dịka Stitchmaps, Kmler, CounturingGE, kml2kml, okwu Plex, n'echiche nke m, otu n'ime ihe kachasị mma m hụrụla ...
obodo 3D dwg Google Earth kml PlexEarth
Jikọọ na UTM na Google Earth
Plex.mark! Ọ bụ mmepe emere na Google Earth ActiveX, nke na-akwado ọrụ ahụ ozugbo na UTM, ọ bụghị naanị iji nweta nhazi kamakwa ịbanye. Bụ n'efu. Wụnye Plex.mark! A gha ibudata ya na Plescape, onye Greek na emeputa Plex.Earth ngwaọrụ; Mgbe ị wụnye ya, a na-emepụta ụzọ mkpirisi na desktọọpụ. Maka…
Jikọọ AutoCAD na Google Earth
Ọchịchọ nkịtị nke onye ọrụ AutoCAD bụ ijikọ na Google Earth, iji nwee ike ịrụ ọrụ na onyonyo nke ihe egwuregwu ahụ nwere, ọ bụ ezie na a na-enyo ya enyo, kwa ụbọchị, anyị na-achọta ihe ka mma ma ọ bara uru karịa enweghị ihe ọ bụla. Taa, anyị ga - ahụ ụzọ opekata mpe ụzọ abụọ iji mee ya: A. Site na iwu ImportGEImage Nke a ...
obodo 3D dwg Google Earth PlexEarth
Obere ihu Page 1 Page 2